Iyo Inoshandiswa Kune Hydraulic Cylinder
Iyo hydraulic cylinder inowanzoreva iyo hydraulic cylinder. Iyo hydraulic cylinder rudzi rwe hydraulic actuator iyo inoshandura iyo hydraulic simba kuita mehendi simba uye inoita mutsetse mukomboni kufamba (kana kusvetuka kufamba). Icho chiri nyore muchimiro uye chakavimbika mukushanda. Kana ...
Maitiro Eti Wakagadziriswa Hydraulic Cylinder
Iyo hydraulic cylinder, muchokwadi, chikamu chakakosha chemuchina wemuchina. Inofanira kusangana nezvinodiwa zvekukanda, kurova, nzvimbo yekumisikidza uye saizi yekumisikidza yemidziyo yese. Yakakosha compact dhizaini yekuvaka michini, iyo humburumbira muganho wakasimba kwazvo. Mushure me d ...
Ita basa rakanaka mukuchenesa, unoda kuita basa rakanaka pane yekuchengetedza iyo hydraulic cylinder, saka inofanira kuita basa rakanaka rekuchenesa. Ichi chinhu chakakosha kwazvo, iyo hydraulic cylinder mukushandisa kwenguva refu-inoburitsa yakawanda yeguruva uye tsvina, kana ikasacheneswa munguva, ichaita ...